११ वटा कम्पनीको राइट शेयर आउँदै, कुन-कुन कम्पनी छन् ? (नामसहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
११ वटा कम्पनीको राइट शेयर आउँदै, कुन-कुन कम्पनी छन् ? (नामसहित)
काठमाडौं । विभिन्न ११ कम्पनीको रु सात अर्ब ५४ करोड ७० लाख २४ हजार ८१ मूल्य बराबरको ७५ करोड ४७ लाख २४० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशनको तयारी गरिएको छ ।
भारतीय राजदूत विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै हिड्ने नौ जना पक्राउ
भदौ १३ ।चितवन,चितवन बन्दको आह्वानमा उत्रिएका नेकपा-माओवादीका नौ कार्यकर्ता पक्राउमा परेका छन । माडी […]
इन्धनसहितका १४० गाडी भित्रिए
विराटनगर, विराटनगरस्थित रानी भन्सारमा बुधबार अपराह्नसम्ममा भारतबाट एकसय चालीसवटा मालवाहक ट्रक भित्रिएका छन् […]
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विराटनगरमा रहेको भारतीय दूतावासअन्तर्गतको ‘फिल्ड अफिस’ हट्ने बताएपछि […]
रेणु दाहालको अग्रता बढ्दै : हाल ९९ मतको अन्तर
साउन २१, चितवन । भरतपुर महानगरपालिकामा हिजो भएको निर्वाचनको पछिल्लो मतगणना अनुशार मेयर पदमा देवी ज्ञवालीलाई […]
असार २२,इराक । इराकमा अवस्थित मोसुलको पूरानो सहरको सानो इलाकामा अझै पनि करिब ३ सय इस्लामिक स्टेट्स (आइएस) […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सबै क्षेत्रका सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने […]